Västbynအပေါ်ခိုးယူကယ်ဆယ်ရေး! | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 20 စက်တင်ဘာလ, 2016 အားဖြင့် Holmbygden.se
“အဆိုပါလှေသာအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ”, အနောက်ကျေးရွာရေကူးအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုပြောပါတယ်. အခုတော့သို့သော်အခိုးခံရပြီ, ကယ်ဆယ်ရေးလှေပေါ်လာသော.
ဒီစက်တင်ဘာလခိုးယူVästbynအပေါ်အများစုကဖွယ်ရှိ, ကယ်ဆယ်ရေးလှေ. ဖွင့်လှစ်ခြင်း လက်ခံရရှိ လျှင်ပိုပြီးမျှမမြင် ကျေးဇူးပြု.. မကြာခဏရေချိုးဧည့်သည်လှေကယ်နှုတ်ကြလိမ့်မည်အဆိုအရနွေရာသီရှိခဲ့. သို့သျောယခုအဲဒါကိုပျောက်ဆုံးကြောင်းမှတ်ချက်ပြုထားသည်, နှင့်သောကင်ဧရိယာတဝိုက်နှက်ခဲ့သည်.
ဒါဟာကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ6အဆိုပါရေချိုးအပေါ်တစ်ဦးဗန်မြင်ကြလှေကနေ 17 နာရီလောက်မှာန်းကျင်စက်တင်ဘာလ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်လှေဖြင့်ကမ်းနားဆီသို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါဗင်အလျင်ရုတ်တရက် ပြု. ဖွင့်ကက်ဘိနက်တံခါးများနှင့်အတူသှားကွ၏. အနည်းဆုံးအဘယ်သူမျှမလှေရှိကွောငျးပြီးနောက်. ဒါဟာထို့နောက်ဧကန်အမှန်နှင့်အတူဆိုပါတယ်မရနိုင်မယ့်ရှေ့တော်၌ရှိ၏ အကယ်., ဒါပေမယ့်အများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိကဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်.
သူတို့ကဗန်ဘို့ဖွစျနိုငျပါတယျဘာနီးကပ်နီးကပ်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်တှေ့မွငျရမွငျသောအခါပြောနိုင်တဲ့သူအခြားမည်သူမဆို Is, ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီး s ကို!
တစ်ဦးငြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောချိုးဖောက်မှုများမှာရှာနေသင်တန်း၏ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေတဆင့်မခေါ်သင့်တယ် 112. သောရဲတပ်ဖွဲ့မကြာခဏအသိပညာနှင့်အတူ5ကွာ Mil, တဦးတည်းကမျှသာသို့မဟုတ်သည့်အခါဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းထုတ်စရာအခြေအနေများနိုင်ပါတယ် “ရုံ” သံသယဖြစ်ဖွယ်အရာတစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးသူကလည်းတိုက်ရိုက်ဝေမျှဖို့စမတ်နိုင်ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာ Holmes Group မှ. ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်နှင့်အတူ. ထို့ကြောင့်တိုက်ရိုက်ကူးရောက်ရှိ 300 Holmes နှင့်အနီးတဝိုက်မျက်စိနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ. သင်သည်လည်း join သငျသညျပြီးသားမဟုတ်ရှိပါက, ကျေးလက်ဒေသတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်ထွက်ရှာရန်.
Västbynအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးလှေအိုင်ပေါ်မှာကမ်းခြေမှာသို့မဟုတ်အထဲကအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်တစ်ဦးရေနစ်သေဆုံးများအတွက်အရေးပါသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ရောက်ရှိမည်ရှည်အရေးပေါ်န်ဆောင်မှုများအတွက်အချိန်နှင့်လူနာတင်ကားကြာသည့်အခါမဆိုအခြားရှင်သန်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကျဲပါးလူနေထူထပ်သောဒေသများတွင်၌တည်ရှိ၏ကဲ့သို့ပင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်. Holmes ခုနှစ်တွင်လည်းအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားလျက်ဒေသများ၌နေသောဒါခေါ် Enhanced အိမ်နီးချင်းလှေအသုံးပြုမှုကိုကယ်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်. Holmsjönတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံးနှိုးဆော်သံမှာအရေးပေါ်နှိုးစက်အလိုအလျှောက်ကို SMS မှတဆင့် Holmes န်းကျင်စေတနာ့ဝန်ထမ်း alarms နှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပေါ်ထွက်ရ၏မတိုင်မီဒုက္ခဆင်းရဲအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုကယ်ဆယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများ. စီမံကိန်းအားကောင်းအိမ်နီးချင်းအကြောင်းကိုပိုမို Read Holmes အတွက်ကဒီမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်. ဒီနေရာတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လိုလျှင်သင်သည်လည်းသင်၏အအကျိုးစီးပွားဖျောပွနိုငျ.